जागिर खोज्दै भाैंतारिएका दिवसलाई सीपले बनायो सफल उद्यमी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निर्मला घिमिरे , २८ फाल्गुन २०७५
काठमाडौं। डेविस वालेसले भनेका छन्, ‘सफलताका लागि एकै विचार काफी हुन सक्छ।’ त्यस्तै विचारले नै सफल बनायो, इलाम नगरपालिका–६ का दिवस श्रेष्ठलाई।
‘बाँसमा सम्भावना छ, आउनुस् नेपालमै मिली केही गरौँ।
बुझौँ बुझाउँ अनि उद्यमी बनी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ।
राष्ट्रका लागि केही गरौँ, विदेश नजान अहम भूमिका खेलौँ।’ श्रेष्ठको यो मुलमन्त्र हो।
र, यही विचारले उनलाई एक सफल उद्यमी बनाएको छ। ९ वर्षको उमेरदेखि आमा बुबाको पसल विराटनगरमा बस्दा हस्तकलाका सामान बनाउन थालेका दिवसलाई हस्तकलाले नै एक सफल उद्यमी बनायो।
२५ हजार लगानीबाट सुरु गरेको बाँसबाट हस्तकलाका सामान बनाउने व्यवसायबाट अहिले दिवसले ८०/९० लाख जायजेथाको व्यवसाय बनाइसकेका छन्। प्रशिद्ध विद्वान विथोविनले भनेका छन्, ‘लगन छ भने सफल हुनलाई लगानी चाहिँदैन।’
दिवसको पनि सीप र लगनशीलताले नै उनलाई सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायले एक सफल उद्यमी बनायो। मुसुक्क मुस्कान्, के्रतासँग गर्ने भलाद्मी व्यवहार, सामान बिक्री गर्ने शैली सायदै जोकोही पनि दिवसको पसलमा पुगेर केही समान नकिनि रित्तै फर्कन मुस्किलै पर्न सक्छ।
इलामबाट २०४९ सालमा विराटनगर झरेका दिवस सानैदेखि पसलमा बसे। उनी स्कुल पढ्दै पसलमा बस्न थाले। पसलमा बस्दा उनले हस्तकलाका सामान बुन्न थाले।
उनकी आमाले पनि हस्तकलाका सामान बाँस जस्तै तर सानो आकारको निगालोबाट विभिन्न हस्तकलाका सामानहरु नाङ्लो, ढाकी, घडी, सोफा, कुर्सी भकारी लगायतका विभिन्न सामग्री बनाउँथिन्। दिवसले पनि आमाको सीप आफूमा पुस्तान्तरण गरे। दिवस भन्छन्, ‘हस्तकलाका आर्कषक सामान बनाउँदा रमाइलो महशुस पनि हुने, काम पनि हुने, विस्तारै स्कुल जान मन लाग्न छाड्यो काममा रमाउन थालेँ।’ दिवसले निम्म माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। अध्ययन निम्नमाध्यामिक तहसम्म भएपनि व्यवहार र विचारमा भने पीएचडी गरेजस्तै परिपक्क देखिन्छन्।
उनका पसलमा नेपाली ग्राहक भन्दा बढी विदेशी ग्राहक आउँछन्। दिवस राम्रोसँग अंग्रेजीमा संवाद गरेर आफ्ना सामग्री बिक्री गर्छन्।
हेर्दा सहज देखिएपनि जीवन निकै संघर्ष पूर्ण रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
विराटनगरमा आमाबुबासँग पसल गर्दा गर्दै उनी काठमाडौं छिरे। काठमाडौंमा जागिर खोज्न निकै मुस्किल पर्यो। बल्लतल्ल २५ सयको जागिर भेटे। जागिर गरेको केही समयपछि उनले आफ्नै कलाबाट व्यवसाय गर्ने सोच बनाए। उनले कुपनडोलमा आर्यमन हस्तकला पसल खोले। ‘पसल खोलेको १२/१३ वर्ष भइसक्यो व्यवसाय पनि राम्रो चलेको छ, सोचेजस्तै छ व्यवसाय’, दिवसले भने।
दिवसले आफ्नो मेहनत र कलाबाट एक सफल उद्यमी बन्न सफल भएका छन्। दिवको कलालाई सम्मान स्वरुप सरकारले वेदबास युवा उद्यमी पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ। आफूले पाएको सम्मान स्वरुप कदरपत्र देखाउँदै दिवसले भने, ‘मेहनतको फल निकै मीठो नै हुन्छ, सरकारले मलाइ यो वर्ष सम्मान गरेको कदरपत्र।’
‘मानिसहरु मेरो काम देखेर सजिलै सोच्छन्, चिनेजानेका आफन्तहरु पनि पैसा कमाएको मात्रै देख्छन्, हातमा ठेला उठेको देख्दैनन्। आँट हुनुपर्छ, साहस हुनुपर्छ र चाहना हुनुपर्छ हरेक काममा सफल बन्न सकिन्छ’ , श्रेष्ठले थपे।
दिवस सफल हुनुमा उनको दृढ विश्वास् पनि हो। उनलाई चिनेजानेका मान्छे कति छिटो प्रगति गर्यो भनेर छक्क पर्छन्। अरुको काम देखेर छक्क पर्ने, रिस गर्ने, कुरा काट्ने समयमा धेरै युवाले श्रम गरेमा सबै सफल हुन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘सफल हुन हातमा ठेला उठ्नु पर्यो, मैलो लाग्नु पर्यो, काम गर्दा गर्दै कपडा फाट्नु पर्यो।’ केही वर्ष अगाडि जागिर गरेर २५ हजार जम्मा गरी आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका दिवस अहिले आफैँ रोजगारदाता समेत भइसकेका छन्। नेपालमा युवा आफ्नो परम्परागत पेशालाई अंगाल्न लाजमान्छन्, सीप हुँदाहुँदै पनि सुखी जीवन, जागिरे जीवन रोज्न थाल्छ र पैसा भएन भन्दै विदेशीन्छन्।
सीप र कलाले निपूर्ण नेपालीले आफ्नो सीपलाई पहिचान गरी सम्मानका साथ सदुपयोग गर्न सके नेपाली विदेश जानैपर्ने बाध्यताको अन्त्य सजिलै हुन्छ। दिवस आफ्नो सीप र सफलता प्रति आफैँ उत्साहित हुँदै भन्छन्, ‘कतिले जागिर गर भने, के गर्छस् यस्तो पेशा भन्नेहरु पनि भेटिए तर मलाइ जसले जे भने पनि आफ्नो पेशामार्फत नै सफल हुनसक्ने विश्वास थियो।’
रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने युवाहरुको निकै लामो लर्को लाग्न थालेको छ। विदेशमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो अमूल्य श्रम चुकाउन धेरै नेपाली श्रमिक बाध्य छन्। काम गर्नेलाई नेपालमा नै राम्रो अवसर छ।
दिवलसले बासँबाट हस्तकलाका सामग्री निमार्ण गरेर मनग्य आम्दानी गर्छन्। नैकापमा हस्तकला निमार्ण गर्ने उद्योग छ। केही वर्ष अगाडि २५ सयको जागिरका लागि भौतारिएका दिवसको कारखानामा ९ जना श्रमिकले रोजगारी पाएका छन्।
दिवसका अनुसार उनका उद्योगमा एक जना शारीरिक अशक्तता भएका युवा, एकजना महिला र अन्य युवाहरु काम गर्छन्। दिवस भन्छन्, ‘शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले पनि बसेर बाँसका विभिन्न सामग्री निमार्ण गर्न सक्ने हुँदा सीप भएका यस्ता युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ।’
उनले देशैभरीबाट बासँबाट बनेका आर्कषक सामग्री सीप अनुसारको उचित मूल्य दिएर ल्याउँछन् र बिक्री गर्दा समेत सीपको मूल्य सुनाउँछन्।
बाँसका चोयाबाट भकारी, घडी, मन्दिर, सोफा, कुर्सी, डस्टबिनलगायत सजावटका विभिन्न सामग्री निमार्ण गर्छन् दिवस। आफू एक उद्यमी बन्न सफल भएपनि कारखानामा आफूपनि काम गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘म कामलाई सानो ठूलो ठान्दिनँ। आफ्नो काम गर्न अप्ठ्यारो, लाज केही मान्दिनँ।’ बाँसका सामग्री ल्याउँदा उनले श्रम, सीपको महत्व बुझेर सोही अनुसार पैसा सामग्री बनाउने व्यक्तिलाई दिन्छन् । आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि श्रम अनुसारको ज्याला दिन्छन्।
सोमबार दिवसको पसलमा एकजना नेपाली महिला उनले बाँसबाट बनाएको घडी खरिद गर्न आइन्, घडीको मूल्य ३ हजार ५ सय थियो। हेर्दा निकै आकर्षक देखिने घडीको मूल्य पनि त्यसै अनुसार निर्धारण गरिएको थियो। ती महिलाले भनिन्, साउजी मिलाएर दिनुस् न महंगो भएन, २५ सयमा दिनुस्।’
दिवसले उत्तरमा भने, ‘त्यत्रो बार्गेनिङ गर्ने मूल्य नै राखेको हुँदैन। लैजानुस् न मेहनत धेरै छ । यो एउटा बनाउन नै ४ ÷५ दिन लाग्छ।’
हेर्दा २७÷२८ वर्ष जति उमेरका देखिने दिवस उमेरले भने ३५ वर्ष पुगिसकेका छन् । दिवस भन्छन्, ‘काम गर्दा गर्दै ३५ पुगियो, देशमै काम गर्दा गर्दा सीप र उमेरले परिपक्क भइयो।’
नेपालमा काम भएन भनेर विदेशीने युवालाई लक्षित गर्दै दिवस भन्छन्, ‘युवाहरु देशमा रोजगारी छैन भन्दै विदेश जान्छन्, मेरै कारखानामा काम गर्ने युवाहरुको अभाव छ।’ सीप भएका युवा नेपालमा कम नै छन्। सीप सिकेर नेपालमा केही गरौँ भन्ने सोच युवाहरुमा देखिँदैन। बरु पासपोर्ट बनाएर तत्काल विदेश गएर टन्न पैसा कमाउने सोचमा धेरै युवाहरु भेटिन्छन्।’
रोजगारका लागि विदेश गएका युवाहरु मासिक २०÷३० हजारमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपय त भनेजस्तो काम र कमाइ नहुँदा ऋणको भारी बोकेर फर्कन बाध्य छन्। तर देशमा नै केही गर्ने सोच बनाएका दिवसले वार्षिक ७० लाखभन्दा बढी कमाइ गर्छन्। मेहनत अनुसारको कमाइ पनि राम्रो हुँदा दिवस निकै दंग छन्।
नेपालमा बाँस प्रशस्त पाइन्छ। बाँसबाट उत्पादन हुने हस्तकलाका सामग्रीले राम्रै बजार पाएको छ। नेपालमा भन्दा पनि यस्ता आर्कषक सामग्री विदेश आपूर्ति हुने गरेका छन्। बाँसबाट निकै आकर्षक सजावट सामग्री बनाउने सीप भएका थुप्रै युवाहरु देशका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन्।
सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा घन्किरहँदा देशले मनग्य अर्थोपार्जन गर्नसक्ने बाँसबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउने कार्यमा सरकारले चासो नपुर्याएकोमा दिवस दुखेसो पोख्छन्।
‘सरकारले यसलाई चासोको विषय बनाएर देशमा बाँसको सदुपयोग गरी बाँसबाट उत्पादित सामग्रीलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सके कोही पनि नेपाली युवा कामका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यकारी अबस्था रहँदैन’, उनी भन्छन्।
दृढ विश्वासका साथ अगाडी बढे मानिसका हरेक सपना पूरा हुन्छन् । मानिसले अरुको कुरा सुनेर होइन, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निसंकोच भएर आफ्नो गन्तव्यको मार्गमा हिड्नुपर्ने पाठ दिवसको जीवन संघर्षले हर कोहीलाई सिकाउँछ।